UTM uhlela: ziyini, izici nosizo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sibheka imephu yokuxhumanisa siyabona ukuthi kunohlelo lokubeka lezi zixhumanisi. Luhlelo olususelwa ekubonisweni kwe-cartographic futhi amayunithi alo amamitha asezingeni lolwandle. Ingabe izingcingo UTM iqondisa. Lesi yisisekelo sohlelo lokubhekisela. EsiNgisini lamagama afushanisiwe asho i-Universal Transversal Mercator. Inokusetshenziswa nezici ezahlukahlukene esizobona kule ndatshana.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngezixhumanisi ze-UTM, izici zazo kanye nokusebenziseka kwazo, lokhu okuthunyelwe kwakho.
2 UTM uhlela futhi zone
3 Ukudidiyelwa kwezixhumanisi ze-UTM
Uma sikhuluma ngohlelo lokuxhumanisa i-UTM sikhuluma ngohlelo olususelwa ekubonisweni kwe-cartographic okungamayunithi ayo amamitha olwandle. Phakathi kwezici eziyinhloko sithola ukuthi kungumbono we-cylindrical. Lokhu kusho ukuthi icatshangelwa embulungeni yonke endaweni eyindilinga. Kubuye kube nokuqagela okuguqukayo. I-eksisi yesilinda iqondane ne-eksisi ye-equatorial. Ngakho-ke, inani lama-engeli ligcinwa ukusungula ukucaciswa okungcono lapho kubalwa indawo namabanga.
Izinzuzo lolu hlelo olunazo ngaphezu kwabanye yilezi ezilandelayo:
Ukufana nama-meridians amelwe yimigqa eyakha igridi. Ngale ndlela, ukucacisa okungcono kutholakala lapho kubalwa amabanga noma ukubona lapho kunephuzu elithile emephini.
Ibanga kulula kakhulu ukukala ukwedlula nolunye uhlelo lokuxhumanisa.
Ukuma kwezimo zomhlaba kugcinelwa izindawo ezincane. Le yindlela esingazi ngayo ukukhululeka nohlobo lwendawo ekhona ensimini.
Bearings and tinkhombandlela kulula ukumaka. Ngenxa yalezi zixhumanisi, umuntu angakwazi ukusungula imizila ehlukene, olwandle nomoya.
Kepha njengoba ungalindela, zonke izinhlelo zinezithiyo ezithile. Ake sibheke ukuthi yiziphi izinkinga ezimbi ezihlukile zokuxhumanisa kwe-UTM:
Ibanga livame ukukhuliswa njengoba sisuka endaweni yokuthamba komkhakha nasesilinda. Leli banga lisesiqondisweni esilingana nesilinda.
Ukuqeqeshwa okunjalo kubaluleke kakhulu ezindaweni eziphezulu. Ngakho-ke, siyabona ukuthi incwadi kadokotela iyancipha njengoba siya ezindaweni eziphakeme.
Ezingxenyeni ezihlukile hhayi ngesilinganiso esimisiwe phakathi kwendawo.
Izindawo ezisendaweni ezibandayo azimelwe. Khumbula ukuthi lezi zindawo nazo zibalulekile ezindaweni ezahlukahlukene
UTM uhlela futhi zone
Ukuxazulula yonke inkinga yokushoda kokuqagela kwamamephu wokuxhumanisa we-UTM, umshini wokuphotha wethulwa ukuze uhlukanise ubuso bomhlaba. Ubuso bonke buhlukaniswe ngama-spindle noma ama-zones angama-60 we-degrees longitude, okuholele ekuqagelweni okungu-6 okulinganayo ne-meridian yabo ephakathi. Sizama ukuhlukanisa uthi lokuphotha ngalunye kube sengathi luyingxenye yewolintshi.
Ukusungula ukuhlukaniswa okungcono kokuphotha, zibalwa kusuka ku-1 kuye ku-60 kusuka eGreenwich meridian ngenxa yempumalanga. Ngamunye wabo uhlukaniswe ngezindawo ezahlukahlukene ezibizwa ngofeleba. Landela umkhombandlela osuka eningizimu uye enyakatho bese uqala ngohlamvu C bese uphetha ngohlamvu X. Ukuze ungadideki awekho onkamisa nezinhlamvu zami ezingadidaniswa nenombolo.
Indawo ngayinye ye-UTM iqondisa kahle ivezwe ngenombolo yendawo negama lendawo. Le ndawo yakhiwe yizifunda ezingunxande ezinebanga lamakhilomitha ayi-100 ohlangothini ngalunye. Amanani alezi zixhumanisi ahlala njalo elungile ukuze angadidisi abafundi. Ama-eksisi weCartesian X no-Y asungulwa kulolukhuni, i-eksisi ye-X kube i-equator ne-Y eksisi i-meridian.
Sizobeka isibonelo ngezixhumanisi ze-UTM zendawo yoMkhandlu Wedolobha wase-A Coruña. Kuku-29T 548929 4801142, lapho i-29 ikhomba indawo ye-UTM, i-T band ye-UTM, inombolo yokuqala (548929) ibanga ngamamitha ukuya eMpumalanga kanti inombolo yesibili (4801142) ibanga ngamamitha ukuya eNyakatho. Lolu hlelo lokuxhumanisa indawo lusetshenziswa yonke indawo ukubhekisa kunoma iliphi iphuzu ebusweni bomhlaba. Le yindlela ongathola ngayo kalula noma iyiphi indawo emhlabeni. Ngenxa yalolu hlelo lokuxhumanisa amanani angafakwa ezinhlelweni ezahlukahlukene zekhompyutha ukusetha izilinganiso ngokunembile.
Ukudidiyelwa kwezixhumanisi ze-UTM
Amaphrojekthi asetshenziselwa ukumela into endizeni. Lapha futhi, ukusetshenziswa kwenziwa ngamajometri ne-eksisi yeCartesian. Ukusetshenziswa ngakunye kune-longitude yama-degree ayi-6 futhi kune-meridian emaphakathi ngamadijithi ama-3 longitude ayihlukanisa ibe izingxenye ezimbili ezilinganayo futhi isetshenziselwa ukuqagela kwe-UTM. Ngokunemba okukhulu, siyazi ukuthi indawo ngayinye ihlukaniswe ngokufana kwemvelaphi e-Equator. Lokhu kuhambisana nemvelaphi kukuhlukanisa kube izingxenye ezimbili ezilinganayo ngokusho kwama-hemispheres. Siyazi ukuthi yethu iplanethi sinenkabazwe esenyakatho nendawo eseningizimu ehlukaniswe ulayini we-equator.
Le meridian emaphakathi ne-Equator yiyona emisa izimbazo ezimbili zeCartesian othini lokubeka iphuzu ebusweni bayo bonke. Uma sifuna ukukubona ngeso lengqondo konke lokhu sisendizeni sibona ukuthi indawo emaphakathi nendawo yendawo i-eksisi ye-X ngenkathi i-Equator ingu-eksisi Y. Ngakho-ke, i-eksisi ye-X izoba nomsuka wayo enkabeni yedolobha futhi inenani of 500000. Leli nani liyancipha njengoba siya entshonalanga futhi landa lapho siya empumalanga. Ngale ndlela, lawa mavelu asungulwe ukuthi akwazi ukuhlala enamanani amahle we-X eksisi.
I-eksisi ye-Y inomsuka wayo e-Ecuador kepha ikwenza ngendlela ethile. Ngokungafani nenye i-eksisi, enyakatho Nenkabazwe izoba nenani elingu-0 elinyukela ngaseNyakatho lize lifinyelele kunani elizi-10000000 eNyakatho Pole. Ngakolunye uhlangothi, i-hemisphere eseningizimu izoba nenani elingu-10000000 futhi izokhula ibheke eningizimu ize ifinyelele kunani 0 eningizimu pole. Lawa mavelu abekwe kanjena ukuze ahlale enamanani amahle we-Y-axis.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezixhumanisi ze-UTM nezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » UTM izixhumanisi